दाङ – जिल्लामा अवैधरूपमा चलिरहेका ५ भारतीय गाडीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरेको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले विभिन्न बहानामा दाङ आएर सस्तोमा सामान ढुवानी तथा यात्रु ओसारपसार गर्ने गरेका ५ गाडीलाई कारवाही गरिएको हो ।
ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख मदन कुँवरका अनुसार भारतीय गाडीले गर्दा यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो आएपछि यसमा कडाइ गर्न थालिएको छ । ‘अहिले भारतीय गाडी दाङ आएर व्यावसायिकरूपमा यात्रु ओसारपसार गरिरहेको भन्ने गुनासो व्यापक आउन थाल्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा पनि हामीले निगरानी बढाएका हौं ।’
दाङमा रुट परमिट विनै यात्रु बोक्दै आएको एउटा बोलेरो, ४ जीपलाई नियन्त्रण लिई आवश्यक कारवाही थालिएको प्रमुख कुँवरले बताए । उनका अनुसार ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले १/१ हजार जरिवाना काटेर थप कारवाहीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङमा पठाएको छ ।
त्यस्ता सवारीसाधनलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । भन्सार अनुमति लिएर निश्चित प्रयोजन र निश्चित समयका लागि मात्रै नेपालमा सञ्चालन हुन पाउने प्रावधान छ ।
अनुहारमा हिँड्छन् डरलाग्दा किरा तपाईं आफ्नो अनुहारमा कत्तिको ध्यान दिनुहुन्छ ? कि अनुहारलाई फोहोर नै छोड्ने खालको हुनुहुन्छ ? तपाईं जस्तो खालको भएपनि तपाईंको अनुहारमा हजारौं कीरा सल्बलाइरहेका छन् । यो कुनै गफ हैन ...